स्वास्थ्यका अधिकारीसँग प्रधानमन्त्री देउवाले सोधे–फाइजरको खोप ल्याउन कत्तिको सम्भव छ? – Health Post Nepal
स्वास्थ्यका अधिकारीसँग प्रधानमन्त्री देउवाले सोधे–फाइजरको खोप ल्याउन कत्तिको सम्भव छ?
२०७८ असार ३० गते १९:२५
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोनाविरुद्धको थप खोप ल्याउन सकिने अवस्थाबारे छलफल गरेका छन्। कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीसँग बुढानीलकण्ठ निवासमा प्रधानमन्त्रीले खोपको समग्र अवस्थाबारे छलफल गरेका थिए।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार नेपालमा खोपको अवस्था, कोरोना नियन्त्रणका लागि हालसम्म भएका प्रयास, चुनौती र अहिलेसम्म भएका कामबारे ब्रिफिङ भएको थियो।
‘उहाँले समग्र खोपको अवस्था तथा कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएका काम सुन्नुभयो। त्यस्तो खासै निर्देशन आएन,’ डा. पौडेलले हेल्थपोस्टसँगको कुराकानीमा भने, ‘हामीले अहिलेसम्म भएका प्रगती र चुनौती भन्यौं। उहाँले सुन्नुभयो।’
खोप कति जनालाई लगाइयो, खोप आउने योजना के छ? भन्नेलगायतका विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए।
छलफलको बीचमा प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकाले उत्पादन गरेको फाइजर खोप ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने जिज्ञासासमेत राखेका थिए।
‘उहाँले फाइजर ल्याउन कति सहज हुन्छ, त्यसका लागि भण्डारणको अवस्था के छ भनेर जिज्ञासा राख्नुभएको थियो,’ डा. पौडेलले भने।
कोरोना भाइरसविरुद्ध फाइजर खोप सबैभन्दा प्रभावकारी मानिएको छ। तर, यो खोप माइनस ७० डिग्री तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा उक्त क्षमताको भण्डारण क्षमता नभएको जवाफ स्वास्थ्यका अधिकारीले दिएका थिए।
हालसम्म नेपालमा २६ लाखभन्दा बढीले पहिलो खोपको पहिलो मात्रा पाएका छन् भने दोस्रो मात्रा ११ लाखले लगाएका छन्।
नेपालमा दैनिक १४ हजार खोपकेन्द्रबाट ६ लाखसम्म खोप लगाउन सकिनेछ। त्यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयले फाइजर खोप १२ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि आवश्यक पर्ने भएकाले ल्याउन पहल भइरहेकोबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको डा. पौडेलले बताए।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल, प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंह लगायतका मन्त्रालयका अन्य अधिकारी पुगेका थिए।